Prizm စျေး - အွန်လိုင်း PZM ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Prizm (PZM)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Prizm (PZM) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Prizm ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $158 203 574.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Prizm တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Prizm များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PrizmPZM သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0144PrizmPZM သို့ ယူရိုEUR€0.0122PrizmPZM သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.011PrizmPZM သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0132PrizmPZM သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.131PrizmPZM သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0911PrizmPZM သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.32PrizmPZM သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0538PrizmPZM သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0193PrizmPZM သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0201PrizmPZM သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.328PrizmPZM သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.112PrizmPZM သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0766PrizmPZM သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.08PrizmPZM သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.4PrizmPZM သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0198PrizmPZM သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0218PrizmPZM သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.447PrizmPZM သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.1PrizmPZM သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.52PrizmPZM သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩17.21PrizmPZM သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.47PrizmPZM သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.06PrizmPZM သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.4
PrizmPZM သို့ BitcoinBTC0.000001 PrizmPZM သို့ EthereumETH0.00004 PrizmPZM သို့ LitecoinLTC0.000251 PrizmPZM သို့ DigitalCashDASH0.000167 PrizmPZM သို့ MoneroXMR0.000166 PrizmPZM သို့ NxtNXT1.19 PrizmPZM သို့ Ethereum ClassicETC0.00203 PrizmPZM သို့ DogecoinDOGE4.15 PrizmPZM သို့ ZCashZEC0.000175 PrizmPZM သို့ BitsharesBTS0.555 PrizmPZM သို့ DigiByteDGB0.554 PrizmPZM သို့ RippleXRP0.0481 PrizmPZM သို့ BitcoinDarkBTCD0.000513 PrizmPZM သို့ PeerCoinPPC0.052 PrizmPZM သို့ CraigsCoinCRAIG6.78 PrizmPZM သို့ BitstakeXBS0.635 PrizmPZM သို့ PayCoinXPY0.26 PrizmPZM သို့ ProsperCoinPRC1.87 PrizmPZM သို့ YbCoinYBC0.000009 PrizmPZM သို့ DarkKushDANK4.77 PrizmPZM သို့ GiveCoinGIVE32.21 PrizmPZM သို့ KoboCoinKOBO3.39 PrizmPZM သို့ DarkTokenDT0.0133 PrizmPZM သို့ CETUS CoinCETI42.94
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 04 Aug 2020 17:10:02 +0000.